Kpọọ + 91-993.702.7574 ịmara 15 anyị na 25 Seater Tempo Price Price na Bhubaneswar
Na-achọ ebe ị ga-esi na-agba ọsọ na-aga ebe ị na-aga, na Bhubaneswar? Pebbles Sand'Obi Ụba Ọnụ Ahịa Tempo na Bhubaneswar doro anya na ọ kacha mma. Ọrụ ị nwetara bụ ihe kachasị mma n'obodo ahụ. Ịgba ụgwọ na njem Tempo bụ ụzọ dị mma ị ga-esi gaa ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị n'otu ìgwè. ac Tempo Ndị njem nwere ike ịbụ ezigbo ụgbọala maka njem dị mkpirikpi ma ọ bụ njem ọ bụla ọzọ. Sand Pebbles 'na-enye ego kacha mma Tempo na Bhubaneswar. Anyị na-enye ọtụtụ Tempo njem maka ịgbazite gụnyere Tata Winger 15, 17, 19, oche 21. Ndị otu anyị ga - enyere gị aka ịhazi njem gị zuru oke n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ndị ọkwọ ụgbọala anyị nwere ihe ọmụma miri emi, hụ na njem gị na-agba ọsọ. Lelee Ọnụ Ahịa Akara Tempo na Bhubaneshwar ka ị hụtakwuo ọrụ anyị. Anyị na-etinye ọtụtụ echiche na mgbalị iji nweta afọ ojuju ndị ahịa ka ha wee nwee njem ntụrụndụ dị jụụ.
Na-aga Odisha maka oge mbụ? Ma ọ bụ nwee akwụkwọ nlegharị anya? Ị ga-akwụ ụgwọ 25 Seater Tempo njem ma ọ bụrụ na ị na-eme njem n'otu ìgwè. N'ihe dị ukwuu na Odisha, ịnweta njem Tempo bụ ụzọ kacha mma ị ga-esi jee ma hụ ihe niile. Jide n'aka na nchekwa gị na nkasi obi, n'oge njem ahụ, ebe ọ bụ na a na-enyocha ụgbọala niile tupu ha agbazite.
Ozi 24 hour Service- Anyị na-enye ọrụ niile 24 oge awa niile, n'enweghị oge ọ bụla. Anyị bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka njem tempo na Bhubaneswar, na-enye ndị ahịa anyị ezigbo ọrụ.
Mma- Anyị na-arara onwe anyị nye mgbe nile iji na-ejere ndị ahịa anyị afọ ojuju. Ihe oyiyi anyị niile bụ 5 kpakpando. Anyị bụ nanị ndị ọrụ njem ụgbọ njem na India na onye ọrụ ahịa kacha mma onyinye site na European Foundation maka Quality Management.
Ọkwọ ụgbọ ala & Nchedo- Anyị na-ahụ ka ndị ọkwọ ụgbọala anyị nwere ọzụzụ na nyocha dị mma tupu onye ọrụ na-arụ ọrụ. Anyị na-ahụ ka ndị ọkwọ ụgbọala anyị nwere ọzụzụ Mbụ-Enyemaka maka nsogbu mberede. A na-enyocha oge ọ bụla tupu ịhapụ ụlọ anyị.